Home Services We register domains.
- Checka.com/. domain
- Checka.mm domain
Domain ဆိုတာ internet address ပါ. ရုံးတွေ အိမ်တွေ အတွက် လိပ်စာရှိသလို အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ လိပ်စာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အကြောင်းကို အင်တာနက်မှာ website အဖြစ် တင်မယ်ဆိုရင်တော့ domain တစ်ခုကို အရင်ဆုံး register လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Domain ကို register လုပ်တဲ့အခါ အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ကနေ ကိုယ်ကြိုက်သလောက် သက်တမ်း ၀ယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ် ဝယ်ယူထားတဲ့ အချိန် အတွင်းမှာပဲ ကိုယ်ပိုင်နေမှာ ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးလို့ သက်တမ်းထပ်မတိုးတော့ဘူးဆိုရင် ကိုယ်မပိုင်တော့ပါဘူး။ အဲလိုဖြစ်သွားရင် ဘယ်သူမဆို ရယူနိင်သွားပါတယ်။
Domain မှာ domain type အမျိုးမျိုးရှိပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဝယ်ယူပေးနေတဲ့ domain အမျိုးအစားတွေက Generic ဖြစ်တဲ့ Top Level Domain တွေဖြစ်ပါတယ်။ Computer file တွေမှာ ,doc, .psd, .exe, .xls စတဲ့ extension အမျိုးမျိုးရှိသလို domain တွေမှာ လဲ .com, .net,.org, .biz, .info စသည်ဖြင့် extension အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အများဆုံး အသုံးပြုတဲ့ domain extension ကတော့ .com ဖြစ်ပါတယ်။ Domain extension တွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကတော့
.com (commercial) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် အများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်။ တခါတလေ personal website တွေအတွက်လည်း သုံးကြပါတယ်။
.net (networking) Network လုပ်ငန်းတွေ၊ အင်တာနက်လုပ်ငန်းတွေ စတာတွေမှာ အများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်။ .com မရနိုင်တော့တဲ့ အခါမှာလည်း ရယူအသုံးပြုကြပါတယ်။
.org (organization)အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း တွေ၊ NGO တွေ၊ အသင်းအဖွဲ့တွေ၊ Group of Companies တွေအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်
.biz (business) business အတွက်ဆိုပေမယ့် ယူတဲ့သူ နည်းပါးပါတယ်။
.info (information) ယူတဲ့နည်းပါးပါတယ်။
.asia (Asia) ၂၀၀၆ ကမှ ထွက်လာတဲ့ domain extension အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ .com/.net တွေမှာ ကိုယ် လိုချင်တဲ့ domain မရခဲ့သူတွေအတွက်တော့ .asia မှာယူနိုင်ပါတယ်။ နာမည် အဓိက ထားသူတွေအတွက်တော့ .com/.net ပြီး တတိယ ဦးစားပေး အဖြစ်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသုံးမများလှသလို search engine တွေက သိပ်ပြီး refer မလုပ်ပါဘူး။